Josoe 18 - Ny Baiboly
Josoe toko 18
Ny tabernakla tao Silao - Fanoratana ny tany sisa hozaraina - Faritanin' i Benjamina.
1Nivory ny fiangonan'ny zanak'Israely rehetra tao Silao, ka nanangana ny trano lay fihaonana. Efa resy teo anoloany ny tany.
2Fito ny foko sisa tsy mbola nahazo ny lovany tamin'ny fokon'ny zanak'Israely. 3Hoy Josoe tamin'ny zanak'Israely: Mandra-pahoviana hianareo no hanao tsikamokamo amin'ny fakana ny tany izay nomen'ny Tompo Andriamanitry ny razanareo anareo? 4Koa mifidiana telo lahy isam-poko hianareo, dia hirahiko izy, ary hiainga ka hitety ny tany ireo, ka handahatra ny toetry ny tany hizarana azy, ary hiverina aty amiko indray. 5Hozarainy fito toko ny tany; Jodà hitoetra amin'ny faritaniny ao atsimo, ary ny taranak'i Josefa hitoetra amin'ny faritaniny ao avaratra. 6Hianareo àry handahatra ny toetry ny tany hataonareo fito toko, ka hoentinareo mankaty amiko, dia hanao filokana ho anareo eto anatrehan'ny Tompo Andriamanitsika aho. 7Fa ny Levita, dia tsy mba hanana anjara, ary Gada sy Robena mbamin'ny antsasaky ny fokon'i Manase dia efa nahazo ny lovany tany an-dafin'i Jordany any atsinanana, izay nomen'i Moizy mpanompon'ny Tompo azy.
8Dia niainga ireo lehilahy ireo, ka lasa nandeha, ary nomen'i Josoe didy izy ireo raha nandeha mba handaharany ny toetry ny tany ka nataony hoe: Mandehana hianareo tetezo ny tany, ka alaharo ny toetrany dia miverena aty amiko, amin'izay aho hanao filokana ho anareo eto Silao eto anatrehan'ny Tompo? 9Nandeha ireo lehilahy ireo, ary noteteziny ny tany, nalahany tamin'ny boky ny toetrany isan-tanàna, nataony fito toko, dia niverina tany amin'i Josoe tao an-toby tao Silao izy. 10Dia nanao filokana ho azy ireo, teo anatrehan'ny Tompo, Josoe tao Silao, ka tao no nizaran'i Josoe ny tany tamin'ny zanak'Israely araka ny anjarany.
11Ny fokon-taranak'i Benjamina araka ny fianakaviany no azon'ny olka, ary ny faritany lasany tamin'ny filokana dia ao anelanelan'ny an'ny taranak'i Jodà sy ny taranak'i Josefa. 12Amin'ny lafiny avaratra ny faritry ny taniny dia nanomboka eo Jordany dia niakatra ny faritra nianavaratra amin'ny kosolasolan'i Jerikao, dia niakatra indray tamin'ny tendrombohitra any andrefana, ary nipaka tamin'ny efitra Betavena. 13Avy eo ny faritra dia nahazo an'i Lozy amin'ny kisolasolan'i Lozy, any atsimo, dia Betela izany; dia nidina indray ny faritry ny tany mankany Atarot-Adara, nihazo tamin'ny tendrombohitra ao atsimon'i Betorona ambany. 14Amin'ny lafiny andrefana dia nandroso ny faritry ny tany ary niolaka hatramin'ny tendrombohitra ao anoloan'i Betorona eo atsimo, ka nipaka tamin'i Kariata-Baala, dia Kariata-Jearima izany, tanànan'ny taranak'i Jodà; izany no lafiny andrefana. 15Amin'ny lafiny atsimo, nanomboka eo amin'ny tendron'i Kariata-Jearima ny faritry ny tany, ary nandroso niankandrefana nipaka tamin'ny lohan'ny ranon'i Neftòa, 16dia nidina ny faritra avy amin'ny faran'ny tendrombohitra izay tandrifin'ny lohasahan'ny taranak'i Enoma, ao amin'ny tany lemaky ny Rafaima, eo avaratra; dia nidina indray nandeha amin'ny lohasahan'i Enoma, mankamin'ny kisolasola atsimon'ny Jeboseana, dia nidina hatrany amin'ny loharanon'i Rogela; 17nandroso any avaratra ary nipaka tamin'i En-semesa, nipaka tamin'i Gelilota izay eo an-tandrifin'ny fiakaran'i Adomima, ary nidina mankamin'ny vaton'i Boena zana-dRobena, 18nihazo tamin'ny ilany avaratra ny tendrombohitra eo anoloan'ny Arabaha, nidina tamin'ny Arabaha, 19Nihazo tamin'ny kisolasola avaratr'i Beti-Haglà ny faritry ny tany, ary nipaka tamin'ny farany avaratra amin'ny ranomasin-tSira ny faritry ny tany eo amin'ny vava ranon'i Jordany, ao atsimo: izany no farany atsimo. 20Ary ny farany atsinanana dia Jordany.
21Izany no lovan'ny taranak'i Benjamina amin'ny faritra manodidina azy manontolo, araka ny fianakaviany.
22Ary ny tanànan'ny fokon'ny taranak'i Benjamina araka ny fianakaviany dia: Jerikao, Beti-Heglà, Eneka-Kaisy, Beti-Arabà, Samaraïma, 23Beteta, Avima, Afarà, Ofera, 24Kefara-Emona, Ofnì ary Gabe: tanàna roa ambin'ny folo sy ny zanabohiny. 25Gabaona, Ramà, Berota, 26Mesfe, Kafarà, Amosa, 27Rekema, Jarefela, Tarelà, 28Selà, Elefa, Jebosy, dia Jerosalema izany, Gabaata ary Kariata: tanàna efatra ambin'ny folo, sy ny zanabohiny. >